COP16: Famaranana avy amin’ireo Tanora Mpikaroka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Desambra 2010 6:21 GMT
Niblaogy ireo tanora “mpikaroka” avy amin'ny Tetikasa Manangàna mpanelanelana nandritra ny Fivorian'ny Firenena Mikambana momba ny Fiovaovan'ny Toetr'andro. Ireto ny santionany amin'ny fanambarana sy eritreritra farany momba izay nitranga tao amin'ny COP16 any Cancún, Mexico. (Vakio ny lahatsoratry ny Global Voices voalohany momba io ekipa mpikaroka io ato)
COP16 mpikaroka mpanelanelana avy any Kanada, India, Afrika Atsimo, Aostralia ary Brazil miasa ao amin'ny COP16 / Sary: Andrea Arzaba
Anna Collins, ny mpikaroka avy any Royaume Uni, dia nanoratra ao amin'ny lahatsorany farany indrindra momba ny ahiahiny nandritra ny fotoana faran'ny COP16:
Toa mbola maro noho ny valinteny ny fanontaniana rehefa niala ny Cop16 aho.
Tokony hifaly ve isika noho ny fivoarana hita tao amin'ny Cop16?
Maninona no tsy tsapako ao ambadika ao Bolivia, tompon-dakantsika amin'izany fomba izany?
Tsy nanaja ny lalànan'ny fifanarahana ve ny mpitarika?
Inona avy ireo lalànan'ny fifanarahana?
Raha nisy izao dia ho an'ny tsara sa ho an'ny ratsy?
Satria raha misy firenena iray afaka manakana fifanarahana, midika ve izany fa mahazo fahefàna mitovy amin'izany ny Arabo na ny Amerikana?
Raha marina izany, misy fanantenana ho an'ity dingana ity ve?
Inona no tena dikan'izao rehetra izao hoan'ny toetr'andro, ho an'ny tontolo mamintsika sy ny hoavy mamiratra kokoa?
Satria isika miala amina Cop iray ary miomana ho an'ny iray hafa. Satria ireo governemanta, media ary fiaraha-monina sivily maneran-tany dia samy midera ny fahombiazan'ny Cancun. Satria efa mihamanjavozavo ho tsiahy tontan'ny ela izany, mipetrak aho ary mandinika ny fanontaniako.
Fanontaniana izay mbola tsy azoko valiana.
Voamarika firenena manan-danja iray ny fotoana farany tao amin'ny COP16: Bolivia. Nanoratra momba izany [it] ny Italiana mpikaroka mpanelanelana, Andrea Cinquina:
Nandalo tolona lava ny COP COP/MOP teo amin'ny Bolivia sy ny fitondràm-panjakana, i Bolivia mitaraina satria nanamafy ny fanapahan-kevitra farany teo ny fitondràm-panjakàna. Araka ny firenena Amerikana tatsimo, fifanarahana ankapobeny no tokony hotakian'ny fanapahan-kevitra tahaka izany, fitaovan-dehibe amin'ny dingana arahina any amin'ny Firenena Mikambana. Teny fohy ihany ny an'i Espinosa dia ny hoe tsy afaka manakana fanapahan-kevitra raha firenena iray fotsiny, nefa ny firenena 193 hafa manaiky izany avokoa.
Leela Raina, Indiana mpikaroka, dia namoaka ny laatsorany farany indrindra momba ny toerana farany misy an'i India tao amin'ny fifanakalozan-kevitra momba ny toetr'andro:
Amin'ny fikatonan'ny fivoriana androany, niatrika ny vahaolana tany Cancun i India. Nameno ny banga misy eo amin'ny vondrona mifangaro ao amin'ny G77 sy ny vondrona mpanelanelana Sinoa izany, amin'ny fitsanganana ho an'ireo firenena malemy kokoa. Tamin'ny famoriana mpanao gazety vao haingana tamin'ity herinandro ity amin'ny anaran'ny vondrona BASIC an'ireo firenena toa an-dry Brazil, India, Sina aary Afrika atsimo, nitanisa teboka eto tsy iadian-kevitra izy: Ny voalohany ho an'ny fitazonana ny fe-potoana faharoan'ny fifanarahana ho an'ny “protocole” an'iKyoto satria zava-dehibeamin'izao ny fifantohana amin'ilay “protocole”, izay hany fifanarahana ara-dalàna mifandraika amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro. Tsy mbola azo antoka ny hoaviny satria maro ny firenena te-hamela azy.
Alex Stark, mikaroka ny delegasion'ny Etazonia, dia nanoratra momba ny toerana farany, tsy fahita, nisy ny Amerika Avaratra nandritra ny fotoana faran'ny fifanakalozan-kevitra:
Mety hoe efa valaka loatra ireo mpanelanelana, na disy be olona loatra ny làlantsaran'ny efitra fivoriana, fa tao amin'ny fivoriana “pléniaire” vao tapitra teo, hafahafa ihany ny fahavitrihan'ny efitra manontolo. Ankoatra ny fandraisana anjara avy amin'ny vahoaka mahazatra (Bolivia, Cuba, sns.) izay nanamarika fa mbola misy tokony amboarina ny ambagovangon'ny lahatsoratra, ireo firenena rehetra hafa nanolotra fanohanana mavitrika an'ilay lahatsoratra, sy nandokadoka ny ezaky ny fitondràm-panjakana Meksikana hitantanana fifanakalozan-kevitra mangarahara sy misokatra. Narahana tehaka mafy izay fandraisana anjara rehetra. Na i Even Todd aza, izay mpitondra teny mahafehy tena, dia nanambara hoe “ndeha hofaranana ity fifanarahana ity.” Na dia mbola misy fivoriana maro tokony hatao aza ity hariva ity, tsapa dia tsapa fa ho afaka hahita marimaritra iraisana mitovy zara tsara ireo firenena ireo.
Sarotra ny manazava ny naha-nampangitakitaka ny tao anaty efitra tao. Mety hoe tsy fifanarahana hamonjy ny planeta no ataonay eto, fa amin'ny tontolon'ny fifanakalozan-kevitra amerikana momba ny toetr'andro, fifanarahana saika niraisana teo amin'ny firenena vao misondrotra sy ny firenena mandroso, tsy nanam-paharoa mihitsy ny tehaka sy ny fanohanana. Voalohany hatramin'ny fivoriana tany Copenhagen tamin'ny taon-dasa izao no ahazoako toky fa afaka manamporofo amin'izao tontolo izao ity dingana ity fa afaka mahomby.
Famoriana mpanao gazety ho an'ny UN Foundation tany COP16 niaraka tamin'ireo mpikaroka Kanadiana sy Meksikana, eo afovoany i Joshua Wiese, mpandrindra ny Tetikasa Manangàna mpanelanelana/Sary: Andrea Arzaba
Farany, Andrea Arzaba, mpikaroka Meksikana ary mpitoraka blaogy ho an'i Global Voices Online, namarana ny lahatsorany farany avy amin'ny hetsika UNFCCC, amin'ny fanantenana fa ho tanteraka ny teny nataon'ireo mpanelanelana Meksikana:
Manantena tokoa aho fa hotanteraka ireo fanamby nataon'ireo mpanelanelana Meksikana, ary harahiko izay ataon'ireo mpanelanelana sy olo-manan-danja hafa, izay nampiseho asa mendri-piderana nandritra ny roa herinandro farany teo. Satria izao, rehefa vita ny resaka, no fotoana ilàna hanaovana ny asa!